Comedy ukusebenza "Qaphela, owesifazane." Uphenyo isiteji ulwazi mayelana nabalingisi
I play amahlaya ngokuthi "Isexwayiso, owesifazane!" Uqhubeka isihloko ubuhlobo babantu, okuyinto vele uye wasiphakamisela emisebenzini yakhe ngu umlobi odumile Belarusian Andrew Kureichik. Uhlamvu emaphakathi play a guy osemusha okuthiwa Serge, umculi French owachitha ukuphila kwakhe ezama ukuthola esiyingqayizivele kunazo. Kodwa kungakhathaliseki wafuna indlela, angakutholi kwelinye owesifazane zonke izimfanelo ezaziyobenza ukwenza kube ekahle. Ngakho, uSerge ihlangabezana kanyekanye ne izintokazi ezintathu, ngamunye nguye okungcono. Kodwa ngokushesha le idyll ngeke siphele lapho ngengozi izimbangi kuyodingeka ukuhlangabezana endaweni efanayo ngesikhathi esifanayo. Njengoba kungase kulindeleke, ukuhlangana abesifazane amahle izinkinga ngempela empilweni iqhawe lethu. Manje kuyodingeka ukhethe.
Mayelana play amahlaya Umbhali "Qaphela abesifazane"
Ukusebenza izibuyekezo akhayo ukuze mangaza ngisho Abadali zabo, namuhla ijabulela ithandwa enkulu. wemidlalo Belarusian Andrei Kureichyk eside kwaziwa umphakathi. Izethameli uyazi kahle imisebenzi yakhe ezifana amaskripthi amafilimu "Christmas Tree", "Uthando-isanqante", "Odessa-mama", "Yulia" nezinye imidwebo eminingi. Lapho wemidlalo ayelungisa umsebenzi wakhe onesihloko esithi "Isexwayiso, abesifazane", wayengase ungacabangi ukuthi play ngakho izethameli like it, kuyoba ethandwa.
Ukuthandwa the comedy "Xwayani owesifazane"
lokhu ukukhiqizwa Namuhla ukubeka amatiyetha eziningi Russian ukuthi bamele umbono wabo ngalo indaba ethakazelisayo.
On qophelo Central Indlu nesiko railwaymen, ungase futhi ubone ahlekisayo "Qaphela abesifazane." Ukusebenza Izibuyekezo (TSDKZH futhi ngokuphindaphindiwe wakubeka) kuyinto enhle kakhulu, futhi izibukeli abebengeneme cishe ayikho. Adume "eMoscow Music Hall" wadala ukukhiqizwa wakhe siqu "Qaphela abesifazane." Ngenhla kwakungisiza iqembu elikhulu. Baye wakwazi ukwakha umoya omuhle ukuthi udonsa kusukela ekuqaleni. Ngaphezu kwalokho, kule eyodwa ukusebenza nabalingisi engcono sasihlangana. Ekwakhiweni sithatha amahora amabili futhi siqukethe izinyathelo ezimbili. izilaleli Contemporary ujabulela umbukiso: "Caphelani, abesifazane", likhuluma uyaphinda uba kwayo.
The hero eyinhloko the comedy "Qaphela abesifazane" - umfana okuthiwa Serge - imvelo zokudala. Kodwa kuthiwani umculi abasha, futhi uma ethatha izinto kalula, like zonke engumFulentshi, futhi yokubonisana uthando kakhulu? Ufuna kuzo zonke owesifazane izici enhle ukuthi kufanele kube darling bakhe kuphela. Akumangalisi charm yakhe amantombazane amathathu nje. Ababheki kwa each nye, kodwa sonke ngokulinganayo kuyena. USerge kunzima Ngamunye kubo kwaba kuye kahle nokuthi zingabantu ngabe yikuphi hhayi bazana. Lulu umfundi ukuzikhohlisa, inkanuko, barmaid anolaka uJacqueline, Aristocrat elicwengiweyo Marisabel ekuqaleni ubengawazi yokuthi ngamunye wabo abe engumFulentshi engenangqondo kuphela. Kodwa njengokuba kungekho nto efihlwa ukuthi ngelinye ilanga kwakungeke sobala. Ngakho-ke, kwesinye, kodwa hhayi umlingiswa oyinhloko, usuku, abesifazane abesahlanganyela. Lapho ethola ukuthi izimbangi sibonga Serge, Heroine unqume ukwenza isahlulelo yalo ayethembisene ongathembekile.
Abahilelekile kule ahlekisayo "Xwayani owesifazane"
Umdlalo wathola Izibuyekezo ezithophayo kakhulu hhayi kuphela ngenxa indaba ethakazelisayo, isitatimende ezinhle, kodwa futhi sibonga abadlali kakhulu ukudlala. Kulesi play comedy wakhetha iqembu abaculi abanamakhono. Ukusebenza "Qaphela Abesifazane" (izilinganiso izilaleli khombisa) Inkulumo ezahlukene, ngokucacile okukhulu izinhlamvu ekhona, isitayela acacile game abadlali. Lokhu quartet emangalisayo ekwazile ukwenza isitatimende wangempela charm isiFulentshi, bona asize izilaleli nge look ezihlekisayo ngezinye izinto sina. Omunye umlingiswa e imikhiqizo ezahlukene ahlekisayo adlalwa abadlali ezahlukene.
Ekhuluma ewukuhlakanipha okwenziwe umculi French Serzha Dyubua ababukeli ungabona Victor Dobronravov, Artyom Osipov, uGregory Siyatvinda. play Jacqueline barmaid omkhulu Kristina Babushkina futhi u-Agrippina Steklov. Alexander Ursulyak futhi Glafira Tarhanova umsebenzi oncomekayo ngendima ladies emphakathini okusezingeni eliphezulu Marisabel. Enye intombazane, uLulu umfundi, ungadlala kwezinye izidalwa Olga Lerman, kwabanye - Anna Starshenbaum. Noma ubani abaculi wayedlala play, alwa ngayo indima yawo, lembula ngokugcwele nobuntu uhlamvu.
Ukusebenza "Qaphela Abesifazane": Izibuyekezo
Lokhu othakazelisayo comedy show kungabonwa emazingeni ahlukahlukeneko eyanikezwa amatiyetha ezahlukene, adlalwa abadlali ezahlukene. Kodwa kuzo zonke izinguqulo lezi imikhiqizo hit indawo emphakathini. Izethameli ngamunye ngamunye ishiywa bencoma Izibuyekezo ngesakhiwo, isiteji nabalingisi ukudlala. Comedy Umculi, esikhuthazayo, kubangela imizwelo eyakhayo. Akumangazi ukuthi izibukeli ezintsha ugijimele ukuthenga amathikithi kuya show: "Caphelani, abesifazane" ngemva izimpendulo eziningi kangaka ezinhle. Izibuyekezo eziye abakufunda ngaphambi kokuya enkundleni yemidlalo, waqinisekisa ngokugcwele - abaningi isimangalo. Ngisho nalapho umuntu ayikuthandi kulungiselelwa - lababantu izicukuthwane kuphela.
Kancane okwengeziwe play
Khanyisa amahlaya French "Qaphela abesifazane" like okufanayo nezintokazi ezibuka futhi amadoda, ngoba ukuphila kwethu, ngothando, uthando kanye search for ekahle. Abalingisi abathintekayo kulesi ukukhiqizwa uguqule ngokuphelele zibe nezinhlamvu zabo, futhi ingabonakali nguwonkewonke. Ngokuvamile izibukeli ezimi zibabaza umdlalo abadlali, abaholwa ukukholelwa konke okwenzekayo enkundleni. Ngokulinganayo ukubukeka kahle indima isihloko bese Victor Dobronravov, futhi Artyom Osipov, futhi uGregory Siyatvinda, ngamunye kuletha ukunambitheka kwako ukuba umlingisi. Lokhu ngokulinganayo kuyasebenza futhi nakubafazi imidlalo abadlali kule ahlekisayo "Qaphela abesifazane." Ukusebenza ukubuyekezwa, abadlali - konke lokhu siye wazama ukufihla kulesi sihloko. Izibukeli abangazange Ubuke kulungiselelwa, it is kakhulu Kunconywa wenza kanjalo.
Kirov Drama Theatre: isithombe, repertoire
Gogol Drama Theatre: Umlando kanye repertoire
Theatre "Ukuze eMfuleni Black" (Petersburg): Ikheli, repertoire, ukubuyekezwa
Ulyanovsk Drama Theatre: repertory qembu Umhlahlandlela
Prima ballerina we Bolshoi Theatre: Maya Plisetskaya, Svetlana Zakharova nabanye
Ubani noma yini haunts lezi amatiyetha 10?
INdlela Balts e Sea bebelokhu baziwa kusukela kudala,
Ihhotela Tsambika Sun 2 * (Rhodes, Greece) izithombe kanye nokubuyekeza
Low-grade imfiva, izimbangela zezinkumbulo ukubukeka kwayo.
Utamatisi Gene - best choice umtshali
Alfred Brehm: Biography, impumelelo, izincwadi, futhi amaqiniso athakazelisayo
Izinzwa Cranial, lokuchezuka ezisuka kusukela isifo sabo
Isle of Jura - lwemithombo olulodwa Scotch nogologo. Izibuyekezo
Indlela ukunamathisela ifilimu ocingweni ngendlela efanele. Amathiphu namacebo
"Journey Centre Zomhlaba": nabalingisi aphinga
Isichuse ahlabayo umshini ngamanzi Ukupholisa: Izibuyekezo
Shams Safaga Beach Resort 4 * (Safaga, Hurghada, Egypt): incazelo ehhotela, izithombe kanye nokubuyekeza